कस्तो अनौठो जागिर, अब चोरका लागि पनि यस्तो अवसर ! - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो अनौठो जागिर, अब चोरका लागि पनि यस्तो अवसर !
काठमाडौँ, पुस १३ ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो । बेलायतमा चोरका लागि जागिर खुलेको छ । बेलायतमा कपडाको शोरूम चलाउने एक महिलाले चोरहरूलाई घन्टाको ६५ सय रुपैयाँको हिसाबमा तलब दिइने गरी जागिर खुलेको हो । उनले बार्क डट्कममा यो जागिरको अफर पोस्ट गरेकी हुन् । पसलबाट धेरै चोरी भएपछि हैरान परेकी उनले खुलाएको जागिरको शर्तमा हरेक घन्टा उनको पसलबाट चोरी गर्नुपर्ने रहेको छ ।
उनी भन्छिन्, ‘यो अलि फरक किसिमको जागिर हो । बिदाको सीजन चल्दै गर्दा मेरो पसलमा असाध्यै चोरी हुन्छ । धेरै वर्षदेखि यसो भइरहेको छ । यो समस्यालाई मैले जसरी भएपनि समाधान गर्नुपर्छ । त्यसैले मैले चोरलाई जागिर दिएकी हुँ ।’ महिलाले आफ्नो नाम खुलाएकी छैनन् ।
याे पनि पढ्नुस तिनहुँ डेभलपमेन्ट बै‌ंकमा कर्मचारी माग्यो (सूचीसहित)
पसलमा सीसीटीभी क्यामरा लगायत अनेकौं सुरक्षा व्यवस्था भएपनि चोरी भइरहँदा महिला हैरान छिन् । यसरी जागिर दिँदा कसरी चोरी हुने रहेछ भनेर जान्न सकिने ति महिलाको अपेक्षाको छ । एजेन्सीको सहयोगबाट